PTSD နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပုံများကိုဂရုတစိုက်ဘက်လိုက်မှု (၂၀၀၈) - Porn On Your Brain
အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု Drug- နှင့် PTSD နှင့်အတူကင်းစွဲ Comorbid (2008) တွင်စိတ်ဖိစီးမှု-Related Pictorial တွေကိုမှ
J ကို Neurother ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2009 နိုဝင်ဘာ3အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
J ကို Neurother ။ 2008 ဒီဇင်ဘာ 1; 12 (4): 205-225 ။
Doi: 10.1080 / 10874200802502185
အိမ်ခြံမြေ Sokhadze, Ph.D ဘွဲ့ကို, Shraddha Singh က, Ph.D ဘွဲ့ကို, ခရစ္စတိုဖာ Stewart က, MD မိုက်ကယ် Hollifield, MD Ayman el-Baz, Ph.D ဘွဲ့ကိုနှင့် အယ်လန် Tasman, MD
ကိုကင်းစွဲသည်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူ၎င်း၏ comorbidity မှတဆင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တိကျတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေ။ စွဲ PTSD နှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ချိန်တွင်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူလူနာကုသမှုကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ ဒီလေ့လာမှုကကြားနေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်ဦးစလုံးစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှ Dual-ရောဂါ display ကိုအလွန်အကျွံ reactivity ကို၏ဤပုံစံနှင့်အတူလူနာရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သိပ်သည်း-ခင်းကျင်းဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ (ERP) technique ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Cue reactivity ကိုမူးယစ်ဆေးမှီခို၏သမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအလွဲသုံးစားမှုသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုရန်, နှုတ်ဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပြရသောတစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒီလေ့လာမှုက ERP ကြားနေ, drug- သုံးပြီးသုံးအမျိုးအစား oddball တာဝန်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုမှ cue-related တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ-related လတ်လှုံ့ဆော်မှုစူးစမ်း။ အဆိုပါလေ့လာမှု 14 ကင်းမှီခိုဘာသာရပ်များ, PTSD နှင့် 11 age- နှင့်ကျား, မ-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်အတူကင်းမှီခို comorbid နှင့်အတူ9ဘာသာရပ်များအပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 128 ရုပ်သံလိုင်းလျှပ်စစ် Geodesics EEG system ကိုထိခိုက်စေပုံသုံးအမျိုးအစား (ကြားနေ, မူးယစ်ဆေး, စိတ်ဖိစီးမှု) နှင့်အတူအမြင်အာရုံသုံးအမျိုးအစား oddball တာဝန်စဉ်အတွင်း ERP မှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကိုကင်းမှီခိုခြင်းနှင့် PTSD နှင့်အတူလူနာကသာကိုကင်းစွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်အတူလူနာမှနှိုင်းယှဉ်ပါက, drug- နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ-related အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှအလွန်အကျွံ cue reactivity ကိုပြသခဲ့သည်။ အများစုမှာလေးနက်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတိုကျရိုကျ P3a ၏လွှဲခွင်နှင့်အောင်းနေချိန်၌တှေ့နှင့် centro-parietal P3b ERP အစိတ်အပိုင်းများကိုခံခဲ့ရသည်။ Group မှခြားနားချက်များအဖြစ်ကောင်းစွာမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုများအတွက်အများဆုံး ERP အစီအမံအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု vs. ကင်းအလွဲသုံးစားမှု (နှစ်ဦးစလုံးစွဲသာနှင့် dual-ရောဂါအုပ်စုများ) နဲ့လူနာကြားကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အလုပ် ERP cue reactivity ကို variable တွေကိုအပြုအမူကုသမှုခံယူ dually ရောဂါမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်တန်ဖိုးရှိသောအလုပ်လုပ်တဲ့ရလဒ်ကိုအစီအမံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တင်ပြသည်။
keywords: ကိုကင်းစွဲ, PTSD, ERP, P300, cue reactivity ကို, စိတ်ဖိစီးမှု
ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများအကြားတွင်အလွန်အမင်းပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်သော Comorbid posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD), ကိုကင်းစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးအချက်များ၏တိုး။ လေးစေခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ကုသမှုရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများသည်။
Co-ဖြစ်ပေါ် PTSD နှင့်အတူကင်းစွဲ (တစ်ဦးထက်ပိုမလြှော့နာမကျန်းသင်တန်းရှိသည်နှင့်ပိုပြီး dual-ရောဂါမရှိဘဲများထက်ကုသ refractive နေကြတယ်ဘရောင်း & Wolf, 1995; ဘရောင်း et al ။ , 1995; Coffey et al ။ , 2002; အီဗန် & Sullivan က, 2001; O 'Brien et al ။ , 2004) ။ dually ရောဂါလူနာများတွင်နှစ်ဦးစလုံးရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှရောဂါအခြားရေရှည်တည်တံ့ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘယ်မှာရှုပ်ထွေးသောဆက်ဆံရေး (၌ရှိကြ၏Chilcoat & Breslau, 1998; Jacobsen, Southwick, & Kosten, 2001; Saladin et al ။ , 2003; Shiperd et al ။ , 2005)
မြင့်မားသော PTSD ၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းနှင့်ကိုကင်းစွဲ (ရှင်းပြဖို့ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်Stewart က et al ။ , 1998), အသိမြင်မှုမှ neuroscience တောမှအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံရှိသူများအပါအဝင် (Sokhadze et al ။ , 2007) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအဆက်မပြတ်စွဲတစ်ဦးချင်းစီ၏ပုံမှန်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အများအပြားကသုတေသနလေ့လာမှုများ (အာရုံစူးစိုက်မှု၏အပြောင်းအလဲတချို့၏လုပ်ငန်းစဉ်စွဲနေရာယူသောအယူအဆများအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့များပေးHester, Dixon က, & Garavan, 2006; Lyvers, 2000; Robinson & Berridge, 2003) ကို“ ဂရုပြုဘက်လိုက်မှု” ဟုခေါ်သည်။Franken et al ။ , 1999,2000; Franken, 2003), နှင့်မူးယစ်ဆေး-related တွေကို သာ. ကြီးမြတ် salience နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုကိုမှီ (ကော့ et တစ်ဦး။ , 2006) Cue reactivity ကို (အလွဲသုံးစားမှုသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအလွန်အကျွံနှုတ်, ဇီဝကမ္မပြရသောဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်Carter က & Tiffany, 1999; Childress et al ။ , 1999; Drummond et al ။ , 1995) ။ ထို့အပွငျကိုကင်းချိုးဖောက် cue reactivity ကို (cue အမျိုးအစားနှင့်နည်းလမ်းအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပြထားပြီးဂျွန်ဆင် et al ။ , 1998) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက် cue reactivity ကို၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများဘို့အာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းမြစ်များ၏ဦးစားပေးခွဲဝေဖြစ်ပါသည်Lubman et al ။ , 2000) သို့မဟုတ်အရက်သုံးစွဲခြင်းမှ (Stormak et al ။ , 2000) ။ ဒါဟာ (နှိုးဆွပစ္စည်းများနှင့်အတူမက်လုံးပေးပေါင်းသင်းအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအတွက်အခွအေနောင်း cue reactivity ကိုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်မည်အကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီFranken, 2003; Weiss et al ။ , 2001).
အများအပြားက neuroimaging လေ့လာမှုများ (ကိုကင်းစွဲထဲမှာမူးယစ်ဆေး cue-related တုံ့ပြန်မှုနှင့်တဏှာနှင့်ဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီChildress et al ။ , 1999; Garavan et al ။ , 2000; Hester et al ။ , 2006; Kilts et al ။ , 2001,2004) ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် PTSD ပိုပြီးပြင်းထန်မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်ဆက်စပ်သည်, နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှု၏ neurotoxiceffects (PTSD ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်ဘရောင်း et al ။ , 1995; Najavits et al ။ , 1998;; Ouimette et al ။ , 1997,1999) ။ သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ (PTSD စွဲ၏သင်တန်းတခုတခုအပေါ်မှာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုလိမ့်မယ်အရာအားဖြင့်ယန္တယားလေ့လာခဲ့ကြOuimette & ဘရောင်း, 2003; Stewart က et al ။ , 1998) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (Sud) နှင့် PTSD comorbidity သုတေသနများတွင်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများများထဲမှ cue reactivity ကိုနှင့် PTSD ရောဂါလက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးနှင့်အတူပတျသကျကြောင်းသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏အသိပညာရယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာ (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်စွဲများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးFukunishi, 1996; Handelsman, et al ။ , 2000) ။ စွဲတစ်ဦးချင်းစီကသဘာဝအပြုသဘောစစ်ကူ (ဖို့စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ dysregulation ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်Volkow et al ။ , 2003) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တန်ပြန်လိုက်လျောညီထွေထိခိုက်မခံတဲ့ hedonic homeostasis နှင့်လေ့လာဦးနှောက်ဆုလာဘ်မူမမှန် (Koob, 1997 နှစ်ဦးစလုံး၏ dysregulation အထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆကြသည်; Koob & Le Moal, 1999; Koob et al ။ , 2004) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက် PTSD နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ကိုလည်းဘုံဖြစ်ကြသည်။ သင်္ကေတသို့မဟုတ်စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအသှငျအပွငျ PTSD (ယား, 2000 ၏အဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆင်တူကြောင်းပြည်တွင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပတွေကိုထိတွေ့အပေါ်ဇီဝကမ္မ reactivity ကို; Vasterling & Brewin, 2005) ။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များ PTSD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ,, etc နှလုံးခုန်နှုန်း, အရေပြား conduction တုံ့ပြန်မှု, startle) လှုံ့ဆော်မှုစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောမှ (မြင့်ထုတ်လုပ်ကြောင်းတသမတ်တည်းသရုပ်ပြပါပြီBlanchard ဖြစ်ပြီး 1990; Shalev et al ။ , 1993; Orr & Roth, 2000; Prins et al ။ , 1995) ။ ဤသည် arousal စိတ်ဒဏ်ရာ-related အာရုံ၏တင်ဆက်မှုသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံတွေကိုစဉ်အတွင်းနှင့်စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များ (Blanchard ဖြစ်ပြီး et al ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံရိပ်စဉ်အတွင်း psychophysiological အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီးရှာတွေ့ခဲ့ပြီးကြီးထွား, 1993 ။ Casada et al ။ , 1998; Orr et al ။ , 1998; Sahar et al ။ , 2001) ။ စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုထိတွေ့အပေါ်ဇီဝကမ္မ reactivity ကို PTSD များအတွက်ဘုံသောကွောငျ့, PTSD အတွက်ကိုကင်းစွဲနှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်-related အလားအလာအဖြစ် electroencephalograph (EEG) အစီအမံ (ERP) ကို အသုံးပြု. ဇီဝကမ္မအကဲဖြတ်တန်ဖိုးရှိသောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်သီအိုရီထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
P300 ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်း (၃၀၀ မှ ၆၀၀ မိုင်ကြာပြီးနောက်လှုံ့ဆော်မှု) သည်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အခြားလက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင်အသုံးများဆုံး ERP အတိုင်းအတာဖြစ်သည် (Polich & Herbst, 300; Pritchard, 1981,1986; Pritchard, Sokhadze, & Houlihan, 2001) ။ P300 ၏လွှဲခွင်သည်အာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းအမြစ်များကိုခွဲဝေချထားပေးခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။Katayama & Polich, 1996; Polich et al ။ , 1994) ။ နှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုကျပန်းအလို့ငှာ, သူတို့ထဲကတဦးတည်းမကြာခဏ, (စံ) နှင့်အခြားတဦးတည်းရှားပါး (ပစ်မှတ်) တွင်တင်ပြကြသည်ဌာန၏အဆိုပါ P300 များသောအားဖြင့်, oddball ပါရာဒိုင်းအတွက်ရရှိသောဖြစ်ပါတယ် (Polich, 1990) ။ တတိယလည်းရှားပါးလှုံ့ဆော်မှု (အာရုံ) စံနှင့်ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြရာ oddball တာဝန်တစ်ခုပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာ (ဒါ P300b ခေါ်သောရှားပါးပစ်မှတ်တစ်ဦး centro-parietal P3 ထုတ်ယူသော်လည်းထိုအခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအာရုံ, ဒါ P300a ကိုခေါ်, တစ်နံရံပစ်ကစားနည်း-အလယ်ပိုင်း P3 ထုတ်ယူကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်Katayama & Polich, 1998) ။ အဆိုပါ P3a (ထို anterior ဦးရေပြားနေရာများမှာမှတျတမျးတငျထားနှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလှုပ်ရှားမှုထင်ဟပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထားပြီးFriedman et al ။ , 1993; Knight ဟာ, 1984) ။ ယေဘုယျအတွက် P300 ( "အခြေအနေတွင်မွမ်းမံ / ပိတ်သိမ်း" ကိုကိုယ်စားပြုဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်သွားရမည်အကြောင်းDonchin & Coles, 1988), သုံးလှုံ့ဆော်မှု oddball အဆိုပါ P3a "အရှေ့တိုင်း" အဖြစ်ပုံဖော်တာဝန်နှင့်, P3b အတွက်ပစ်မှတ်ထားဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထားတဲ့စွမ်းရည်ကိုတစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ် (Naatanen, 1990; Potts et al ။ , 2004; Wijers et al ။ , 1996) ။ အဆိုပါ anterior P3a အညွှန်းကိန်းရှားပါးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ Contextual salience, posterior P3b (ထိုလှုံ့ဆော်မှုများ၏တာဝန်-ဆက်စပ်မှုကိုအညွှန်းထည့်နေပုံကိုသော်လည်းGaeta, Friedman, & Hunt, 2003) ။ အဆိုပါသုံးလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား oddball ပါရာဒိုင်းဝတ္ထုအာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုး salience ခြယ်လှယ်ကြသောအခါဒီတာဝန်အတွက်စေ့စပ်အဆိုပါသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ delineating ဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေပေးပါသည်။
(ဒီရောဂါအတွက်ချို့ယွင်းသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အယူဆသက်သေအထောက်အထားပေးရာ P300 အတွက် PTSD အစီရင်ခံစာမူမမှန်အပေါ်လေ့လာမှုများ, အများစုဟာAttias et al ။ , 1996; Blomhoff et al ။ , 1998;ချားလ်စ် et al ။ , 1995; Felmingham et al ။ , 2002; ကားလ်, မော်လတာ, & Maerker, 2006; Kimble et al ။ , 2000; စတန်းဖို့ဒ် et al ။ , 2001) ။ attenuation P300 ရှာဖွေတာလေ့လာရေးအာရုံစူးစိုက်မှုချို့ယွင်း၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို attribute (McFarlane, Weber, & Clark, 1993), သို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု (ချားလ်စ် et al ။ , 1995; Metzger et al ။ , 1997a,b) ။ တိုးမြှင့် P300 လွှဲခွင် (ကြောင့်ပြောင်းလဲရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ်ရှငျးပွခဲ့Attias et al ။ , 1996ခြိမ်းခြောက်လှုံ့ဆော်မှုဖို့), သို့မဟုတ်ကြီးထွား orientation ကို (Kimble et al ။ , 2000) ။ အာရုံ oddball တာဝန်များကိုအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာ-related သို့မဟုတ်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်အခါအများအပြားလေ့လာမှုများ (PTSD အတွက် P3a တိုးမြှင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြBleich, Attias, & Furman, 1996; Drake et al ။ , 1991; Felmingham et al ။ , 2002; Weinstein, 1995) ။ PTSD အတွက်တိုးမြှင့် P300 လွှဲခွင်ခြိမ်းခြောက်မှုလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားသည်နှင့်လျှော့ချ P300 လွှဲခွင် Non-ခြိမ်းခြောက်လှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းမြစ်များအတွက်နောက်ဆက်တွဲလျှော့ချရေးရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။
ကိုကင်း၏ acute နှင့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှု (ERPs ၏လွှဲခွင်နှင့်အောင်းနေချိန်အပေါ် neuropharmacological သက်ရောက်မှုပြုပြင်Bauer က 1997; Biggins et al ။ , 1997; Fein, Biggins, & MacKay, 1996; Kouiri et al ။ , 1996) ။ လွှဲခွင်အတွက်မူမမှန်ခြင်းမရှိဘဲပိုရှည် P300 အောင်းနေချိန် (ကိုကင်းရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်အများအပြားလေ့လာမှုများအစီရင်ခံထားသည်Bauer & Kranzler, 1994; Herning, ဂလိုဗာ, Guo, 1994; Noldy, & Carlen, 1997) ။ cortical အလုပ်မဖြစ်အကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ် ERP လေ့လာမှုအများစု P3b တာဝန်များကိုကိုအသုံးပြုကြခြင်းနှင့် P3a သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများစွဲထဲမှာရှိပါတယ်။ တိုကျရိုကျ ERP အစိတ်အပိုင်းများအလှူငွေကိုနားလည်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၌၎င်း, အထူးသကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုများတွင်တိုကျရိုကျအလုပ်မဖြစ်၏အရေးကြီးသောစဉ်းစားတိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ် (Hester & Garavan, 2004)
အယူအဆ biasing အာရုံအရတစ်ဦးအာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် PTSD Co-ဖြစ်ပေါ်အတူကင်းစွဲနှင့်အတူလူနာလတ်စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့် drug- နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာအာရုံ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်မှနှစ်ဦးစလုံး cocaine- နှင့်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု-related တွေကိုမှပိုကောင်း reactivity ကိုပြသနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်နှင့်အတူ ; အကျိုးဆက်တာဝန်-သက်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်အချက်ပြမှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့လျှော့ချအာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းမြစ်များရရှိနိုင်မှုတင်ဆက်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ ဤလေ့လာမှု၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်သုံးခုအုပ်စုများအတွက် cue reactivity ကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက် drug- နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမှ cue reactivity ကိုဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်: ကင်းမှီခိုခြင်းနှင့် PTSD မပါဘဲ PTSD (dual), ကိုကင်းစွဲ (Sud) ၏ dual-ရောဂါနှင့် ထိန်းချုပ်မှု (CNT) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုထဲမှာအကြှနျုပျတို့အာရုံ drug-, စိတ်ထိခိုက် stress- related သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြားနေလတ် cue ဖြစ်စေဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတစ် oddball တာဝန်ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က drug- နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ-related တွေကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သိမြင်မှု ERP P300 (P3a, P3b) ညွှန်းကိန်းနှစ်ခုစလုံးအပေါ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှောင့်ယှက်ဖန်တီးဖို့မူးယစ်ဆက်စပ်နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ related တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးသုံးပြီးအားဖြင့်ငါတို့သည်တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများအပြုအမူအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်သုံးလေ့လာမှုအုပ်စုများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် (တုံ့ပြန်မှုအချိန်တိကျမှန်ကန်မှု) နှင့် ERP ညွှန်းကိန်း (P3a, ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်း P3b), ကျနော်တို့မူးယစ်-related ပစ္စည်းများမှမ Sud အုပ်စုတွင်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုပုံရိပ်တွေဖို့ဦးစားပေးရွေးချယ်အာရုံကိုခန့်မှန်းလျက်, dual အုပ်စုနှစ်ခုလုံး drug- နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ-related အာရုံ၏တိုးမြှင်အပြောင်းအလဲနဲ့။ အလွန်အမင်းအဓိကပေမယ့်အလုပ်တစ်ခုကို-ဆီလျှော်အာရုံ၏ processing တစ်လျော့နည်းသွားအာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းရည်များနှင့်တာဝန်-သက်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်ကို process မှအရင်းအမြစ်များကိုတစ်ဦးလျှော့ခွဲဝေဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဒီအကြိုးသကျရော, Sud နှင့် CNT အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ dual လူနာအတွက်တာဝန်-သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ (P3b) ၏ posterior ERP ညွှန်းကိန်း၏အနိမ့်ပြင်းအားဟာနှောင့်နှေးတုံ့ပွနျမှုအချိန် (RT ကို) တွင်ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဟောကိန်းထုတ်, နိမ့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက် ERP drug- မှ cue reactivity ကို၏အတိုင်းအတာများနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုဆနျးစစျဖို့, ဤအဓိကအာရုံမှ Oriental တစ်အမြင်အာရုံသုံးအမျိုးအစား oddball တာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်ဘယ်လောက်မြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကြားနေပစ်မှတ်များနှင့်မကြာခဏစံချိန်စံညွှန်းအတွက်တုန့်ပြန် drug- နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ-related တွေကိုနှင့်တစ်ဦးလျှော့ posterior ERP (ဥပမာ P3b) နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်တဲ့ဝတ္ထုလတ်အာရုံတုံ့ပြန်အတွက် anterior ERP အစိတ်အပိုင်း (ဥပမာ P3a) ၏တစ်ဦးတိုးလာလွှဲခွင်ဟောကိန်းထုတ် အဆိုပါ dual အုပ်စုတစ်စုကအခြားအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်းမှီခိုခြင်းနှင့် PTSD diagnoses နှင့်အတူလူနာ task ကို-ဆီလျှော် drug- နှင့်ခြိမ်းခြောက်မှု-related တွေကိုမှပိုကောင်း reactivity ကိုပြသပါလိမ့်မယ်, နှင့်အဆိုး task- ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်သောဤမြင့်မား motivationally အဓိကအချက်ပြမှရွေးချယ်အာရုံကိုဆက်သလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု။
ကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ် / မှီခိုဘာသာရပ်များစင်တာ (JADAC), နှင့်အခြားစိတ်ရောဂါလူနာယူနစ်အလွဲသုံးစားပြုမှု, Louisville ကဆေးရုံအရေးပေါ်ခန်းတက္ကသိုလ်ကနေအဓိကအားရည်ညွှန်းထိုကဲ့သို့သောဂျက်ဖာဆန်ကောင်တီအရက်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကုသမှုပြင်ပလူနာဝန်ဆောင်မှုများ, နှင့်ဆေးဝါးခဲ့ကြသည်။ သည်အခြားအဆောက်အဦများနှင့် Louisville ကမက်ထရိုအေဂျင်စီများနှင့်အတူထူထောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာ Stewart က, ဒီလေ့လာမှုအတွက် Co-စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး, JADAC မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာနှင့် Louisville ကမက်ထရိုဧရိယာ၌တည်ရှိသောနှစ်ခုလူနေအိမ်စွဲကုသရေးဌာန (အမေရိက၏ကုသမှုရာဌာနနှင့် Volunteers) မှာလက်တွေ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ဤအစီအစဉ်များမှတဆင့်ရည်ညွှန်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Hollifield, လေ့လာမှု၌အခြားသော Co-စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး, Louisville ကတက္ကသိုလ်စိုးရိမ် Disorder အစီအစဉ်၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး, ကိုကင်းစွဲနှင့်အတူရည်ညွှန်းလူနာများ၏ရေကူးကန်ကနေစွဲလူနာ PTSD ၏ရောဂါပေါ်နှင့်တိုင်ပင်။ , ပါဝင်ဘာသာရပ်များအတွက်ရည်ရွယ်ချက်, လိုအပ်ချက်, တာဝန်များ, ငွေကြေးပြန်လည်, အန္တရာယ်များ, အကြိုးခံစားခှငျ့, အခြားနည်းလမ်းအပါအဝင်လေ့လာမှုနှင့်ဒေသခံ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (IRB) ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသဘောတူညီခကျြပုံစံများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကြောင်းသောသူအပေါင်းတို့ဘာသာရပ်များရှင်းပြခဲ့ကြသည်။ သဘောတူညီခကျြလကျမှတျမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌မေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီပါလျှင်သူမ / သူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်ရက်စွဲပါသဘောတူညီခကျြပုံစံနှငျ့သဘောတူညီခကျြရရှိခဲ့သူစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများက countersigned တစ်ဦးမိတ္တူလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူသိပ္ပံ၏ဦးစီးဌာနနှင့် Louisville ကဆေးရုံတက္ကသိုလ်ရဲ့အဆောက်အဦအတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အလားအလာပါဝင်သူနှင့်အတူကနဦးအဆက်အသွယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တယ်လီဖုန်းစိစစ်မှတဆင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးအဓိကလေ့လာမှုစံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်. ခေါ်ဆိုမေးမြန်း။ သူများသည်အစည်းအဝေးစံ၎င်းတို့၏ကနဦးခေါ်ဆိုခပြီးနောက် 1 ရက်ပုံမှန်အား5အတွင်းမှာခွင့်ပြုချက်အဘို့ရက်ချိန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာထိန်းချုပ်ရေးဘာသာရပ်များဒေသခံ IRB ကအတည်ပြုကြော်ငြာများအားဖြင့် Louisville ကမက်ထရိုအသိုင်းအဝိုင်းထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ နတယ်လီဖုန်းကနဦးပါဝင်စံတွေ့ဆုံရန်ပြခဲ့ကြသည်။ အားလုံးထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ, အာရုံကြောသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါ၏အခမဲ့ခဲ့ကြသည်ပုံမှန်ကြားနာခြင်းနှင့်ရူပါရုံကိုခဲ့နှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်၏လွတ်ကြ၏။ တယ်လီဖုန်းစိစစ်ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (တယ်လီဖုန်းစိစစ်အတည်ပြုရန်နှင့် DSM-IV များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. ဝင်ရိုးတန်းငါ diagnoses ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်လက်ခံရရှိပထမဦးစွာ et al ။ , 2001) ။ ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်လူနာအုပ်စု၊ အသက်၊ ပညာရေးအဆင့်၊ မွေးဖွားမှု၊ လိင်၊ လူနာများအတွက်လိုက်နာရမည့်တူညီသောသဘောတူညီချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထိန်းချုပ်မှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည်သုတေသနတွင်ပါ ၀ င်သောကြောင့်သူတို့၏အချိန်ကိုပေးသည်။ လူးဝစ်ဗေးလ်တက္ကသိုလ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာ၏လူ့ဘာသာရပ်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ၏သုတေသနအချိန်နှင့်ကားရပ်နားရန်အတွက်ငွေကြေးပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းအတွက်ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းများသည်လိုက်နာခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလိုအပ်သည့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ - ERP စစ်ဆေးမှုများ၊ ဆီးနမူနာများကိုပေးအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ခြင်း) အတွက်ပြီးစီးရန်နာရီ ၂၀ ဒေါ်လာပေးသည်။
စိတ်ရောဂါ status ကိုစစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာစိစစ်
DSM-IV များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူး (SCID ငါ) (ပထမဦးစွာ et al ။ , 2001) ဝင်ရိုးတန်းငါ diagnoses အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှု Disorder (PTSD) က Posttraumatic လက္ခဏာတွေစကေး-ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ (PSS-SR) (သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်Foa et al ။ , 1989, 1997) မေးခွန်းလွှာ။ အဆိုပါ Hopkins လက္ခဏာတွေစာရင်း-25 (HSCL-25) (Derogatis et al ။ , 1974) စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ၏လက္ခဏာများကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လူနာသန်သည့် Edinburgh စာရင်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် (Oldfield, 1971) ။ အဆိုပါစွဲ Severity Index (asi) မှရမှတ် (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, ဥပဒေရေးရာ, မိသားစု, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ရောဂါအခက်အခဲများ၏ဧရိယာများတွင်ပြဿနာပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်McLellan et al ။ , 1980) ။ ကိုကင်းအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များစာရင်း (Michalec et al ။ , 1996) ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းကနေရရှိလာတဲ့ရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုလူမှုညှိယူစကေး (SAS) (သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်Weissman & Bothwell, 1976).
အရည်အသွေးဆီးဝိသဗေဒဖန်သားပြင် (DrugCheck 4, NxStep, Amedica ဇီဝသိပ္ပံ Inc ကို,, CA) ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတည်ပြုစီဘာသာရပ်အတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်အမ်ဖီတမင်းအဘို့, အရည်အသွေးဆီးဝိသဗေဒဖန်သားပြင်, opiates နှင့်ဆေးခြောက်အပိုဆောင်းနှိပ်စက်တ္ထုများ (ဥပမာ, စိတ်ကြွဆေး, opiates, ဆေးခြောက်) ၏ရှေ့တော်မှောက်အကဲဖြတ်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဆေးခြောက်ဘို့ positive စမ်းသပ်ဖယ်စံအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမရခဲ့သည်။ အရည်အသွေးတံတွေးမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှု (ALCO SCREEN ကို, Chematics, Inc, IN) လည်းလက်ရှိအရက်အသုံးပြုမှုထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုဘာသာရပ်နှစ်ဆယ်ငါး (အမျိုးသမီး 9, 16 ယောက်ျား) အသက်ဆိုလို, 41.3 ± 6.1, အကွာအဝေး 32-52 နှစ်, 64% အာဖရိကန်အမေရိကန်များပါဝင်ခဲ့။ ၄ င်းတို့ထဲမှ ၁၄ ယောက်မှာ PTSD မပါဘဲကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်သူများဖြစ်ပြီး SUD အုပ်စုတွင်တာ ၀ န်ပေးခဲ့ကြသည် (အသက် ၄၂.၂ မှ ၆.၆ နှစ်၊ ၆ ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၈ ဦး - ယောက်ျား ၈ ယောက်) ။ Hollifield) နှင့် dually (SUD-PTSD) ရောဂါအုပ်စု (DUAL) ပါဝင်သည်။ သူတို့ထဲကခြောက် ဦး အစောပိုင်းက PTSD ရောဂါပြီးသားစားသုံးမှုအဆင့်မှာသူတို့ရဲ့သမိုင်း၌ PTSD ၏စံချိန်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အုပ်စုနှစ်စုတွင်အမျိုးသမီး ၃ ဦး နှင့်ယောက်ျား ၈ ယောက်ပါ ၀ င်သည် (၃၈.၈ - ၆.၃ နှစ်) ။ ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များသုံးပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောကိုး (အမျိုးသမီး ၄ ဦး၊ အသက် ၃၆.၇ - ၅.၃၊ အကွာအဝေး၊ ၂၉ မှ ၄၅ နှစ်၊ အာဖရိကန်အမေရိကန် ၄၄%) (CNT group) မှဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။
Sud အုပ်စုတကျိပ်နှစ်ပါးသောဘာသာရပ်များကိုကင်းဘို့အပြုသဘောစမ်းသပ်ပြီး, သူတို့၏7အဖြစ်ကောင်းစွာဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုအတွက်အပြုသဘောစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အပြုသဘောစမ်းသပ်ပြီးမ Sud နှစ်ခုဘာသာရပ်များ 60 ရက်ပေါင်းထက်လျော့နည်း၏ abstinence ကာလနှင့်အတူအတွင်းလူနာ JADAC ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်းပြီးနောက်ဒီလေ့လာမှုမှာစာရင်းသွင်းစွဲပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ dual အုပ်စုကိုးဘာသာရပ်များသူတို့ထဲကငါးခုကိုလည်းဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုအတွက်အပြုသဘောစမ်းသပ်ပြီး, ကိုကင်းအသုံးပြုမှုအတွက်အပြုသဘောစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ပလူနာလူဦးရေရဲ့အများစုသူတို့ကိုနီးပါးတဝက်ဒုတိယရွေးချယ်မှုတစ်ခုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဆေးခြောက်ကို အသုံးပြု. အတူလက်ရှိကင်းသုံးစွဲသူပါဝင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အုပ်ချုပ်ရေးအများစုကဦးစားပေးပုံစံအက်ကွဲကင်းဆေးလိပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကိုကင်းစွဲကနေတစ်ဦးတည်းသာဘာသာရပ်သွေးကြောသွင်းကင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စွဲဘာသာရပ်များ၏အများစုနီကိုတင်း / ဆေးလိပ်သောက်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။ Sud အုပ်စုတစ်စုအတွက်ဘာသာရပ်များအဘယ်သူအားမျှ NA (Nacrotics Anonymous) သို့မဟုတ်အရက်အမည်မသိ (AA ကို) အစည်းအဝေးများပါဝင်ထက်အခြားမည်သည့်ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုရှိကြ၏။ Sud group မှ2လူနာမှတပါးဘာသာရပ်အားလုံးသည်, dual group မှတဦးတည်းနှင့် CNT group မှတဦးတည်းညာသန်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများကိုအာရုံကြောသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါမမှန်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းသို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်ထက်အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများအပေါ်မှီခို၏အဘယ်သူမျှမကလက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်သမိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည်ဤသုတေသန၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝအသိပေးထားသောတို့ Louisville ကတက္ကသိုလ်ရဲ့ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုအသိပေးသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ (Protocol ကို IRB #240.06, PT ။ 2) ။ ယင်းနမူနာစုဆောင်းခြင်း (ဆီးမူးယစ်ဆေးမျက်နှာပြင်) အတွက်ဘာသာရပ်များတွင်လည်းတူညီသောလေ့လာမှု protocol ကိုအတွင်း IRB ကအတည်ပြုသီးခြားသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
stimulus တင်ဆက်မှု, EEG / ERP data တွေကိုရှာမှီးခြင်းနှင့် signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့
လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြခြင်း၊ အမူအကျင့်များနှင့်ပုဂ္ဂလဒိresponse္ဌာန်တုံ့ပြန်မှုစုဆောင်းမှုအားလုံးကို E-prime ဆော့ဖ်ဝဲ (စိတ်ပညာဆော့ဝဲလ်ကိရိယာများ၊ PA) ဖြင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုကို 15″ ပြားချပ်ချပ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ လက်စွဲတုံ့ပြန်မှုများကို ၅ ခလုတ်ခလုတ်ဖြင့်ကောက်ယူသည်။ ဘာသာရပ်များအားပစ်မှတ်အမျိုးအစားပုံတစ်ပုံကိုတွေ့သောအခါနံပါတ် ၁ ကိုနှိပ်ရန်ညွှန်ကြားထားပြီးမဟုတ်သောအမျိုးအစားပုံများသို့သော့ကိုမနှိပ်ပါနှင့်။ အားလုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်ဘာသာရပ်များ chinrest အတွက်သူတို့ရဲ့မေးစေ့နှင့်အတူကုလားထိုင်၌ထိုင်ခဲ့ကြသည်။ လက်ထိပ်ခတ်ထားသည့်နေရာသည်ပြား၏မျက်နှာပြင်မှ ၅၀ စင်တီမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ ၁၀ မိနစ်တိုင်းအားလပ်ချိန်ပေးသည်။ EEG အချက်အလက်အားလုံးကို Macintosh G5 ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လည်ပတ်နေသော 1 Channel Electrical Geodesics system (Net Station 50, v ။ 10) (Electrical Geodesics Inc. , OR) ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ EEG ဒေတာကို 128 Hz, 200 - 4.0 Hz Analog filter လုပ်သည်။ vertex ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Geodesic Sensor Net သည်ပေါ့ပါးသော elastic thread ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး Ag / AgCl လျှပ်ကူးပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ ရေမြှုပ်များသည်၎င်းတို့ကိုစီးဆင်းစေရန် KCl solution တွင်စုပ်ယူသည်။ လှုံ့ဆော်မှု - သော့ခတ် EEG ဒေတာဝေဖန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ရပ်များန်းကျင်4ms Post- လှုံ့ဆော်မှုမှ 500 ms Pre- နှိုးဆွ spanning 0.1 ms ယုဂ်သို့ off-line ကို segmented နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ - (၁) ကြားနေပစ်မှတ်၊ (၂) ကြားနေမဟုတ်သောပစ်မှတ်၊ (၃) စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုပစ်မှတ် (၄) စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုမဟုတ်သောပစ်မှတ်၊ (100) မူးယစ်ဆေးဝါးပစ်မှတ်, (1000) မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောပစ်မှတ်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက်ပစ်မှတ်၏ကြိမ်နှုန်းသည် ၂၀% ရှိသည်။ ဒေတာများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်း (မျက်တောင်ခတ်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုစသဖြင့်) အတွက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးမကောင်းသောစမ်းသပ်မှုများကိုပါ ၀ င်သည့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပယ်ချခြင်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကျန်ရှိသောအချက်အလက်များကိုအခြေအနေအလိုက်စီ ထား၍ ERP များကိုဖန်တီးရန်ပျမ်းမျှဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှ ERP အချက်အလက်များကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျန်ရှိသောကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံများကိုဖယ်ရှားရန်ဒီဂျစ်တယ်ကို ၃၀ Hz lowpass တွင်စီစစ်ထားသည်။ ပျမ်းမျှအားပြီးနောက်အခြေခံအား segment စတင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 200 မစ်အခြေခံကာလကျော်တညျ့နှင့်ဒေတာပျမ်းမျှရည်ညွှန်းဘောင်သို့ပြန်လည်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ A ဓိပ္ပါယ်ရှိသော A ဓိပ္ပါယ်ရှိသော A ဓိပ္ပါယ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ရန် ERP မ်ားကိုအတူတကွစုစည်းခဲ့သည်။
အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလတ်ပစ္စည်း (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပေါ်သက်ရောက်မှုရုပ်ပုံစနစ်ကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်IAPS, Lang et al ။ , 2001) ။ Rice တက္ကသိုလ် (Houston, TX) တွင်ပါရဂူဘွဲ့လွန်ကာလ၌ကိုကင်းပုံများကိုပထမဆုံးစာရေးသူမှရွေးချယ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှု (Potts, Martin, Stotts, George, & Sokhadze၊ အတည်မပြုရသေးသောအစီရင်ခံစာ) တွင်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုခံရသောလူနာ ၂၅ ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးပုံသဏ္eachာန်တစ်ခုချင်းစီ၏မည်မျှတုန့်ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ် ၅ မှတ် (၅ ခုမြင့်သည်) ပေါ်တွင်ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပုံရိပ် ၁၁၅ ခုကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုလုံးကို set များအတွက်ယုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 25, SD က = 115 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုရန်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့်ပုံ ၃၀ (၃.၀ အထက်အလယ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၃၀) ရှိသည်။ Valence၊ နှိုးဆွခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးမှုနှုန်းများသည် IAPS ဒေတာဘေ့စ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ ကြားနေနှင့်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုအမျိုးအစားများရှိပုံတစ်ပုံချင်းစီနှင့်လိုက်ဖက်သည်။lang et al ။ , 2001) ။ ကြားနေ (အိမ်သုံးပစ္စည်းများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, သဘောသဘာဝ), စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု (အကြမ်းဖက်မှု, ယာဉ်မတော်တဆမှု, တိုက်ခိုက်မှု၏သားကောင်များ, etc), နှင့်မူးယစ်ဆေး (ကိုကင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး paraphernalia): အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသုံးခုအမျိုးအစားကနေဓါတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ (ဥပမာ, ပစ်မှတ်ကို "ကြားနေ" ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်အိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်) တစ်ဦးချင်းစီပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွင်းအခြားသူများကိုလျစ်လျူရှုသည်အမျိုးအစားများထဲမှထံမှပစ္စည်းများကို stimulus တုံ့ပြန်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ (ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှုန်း 240 စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူ) လုပ်ကွက်၏အမိန့်တန်ပြန်မျှမျှတတဖြစ်ခဲ့သည်။ EEG အချက်အလက်များ၏မှတ်တမ်းတင် 200 ms များအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သော်လည်းတာဝန်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု, 1000 ms များအတွက် screen ပေါ်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန် 1500 ~ 2000 ms အကွာအဝေးအတွင်းကွဲပြား Inter-ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလ။ စမ်းသပ်မှုတွေသုံးခုလုပ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီတိုတောင်းတဲ့ချိုးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ task ကိုဖြည့်စွက်ဖို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 မိနစ်ကိုယူ။
မှီခို variable တွေကို
အမူအကျင့် variable တွေကို လှုံ့ဆော်မှုပစ်မှတ်ထားဖို့ (ရာခိုင်နှုန်း) ယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန် (RT ကို) နှင့်တုံ့ပြန်မှုတိကျမှန်ကန်မှုရှိကြ၏စဉ် electrophysiological variable တွေကို အဆိုပါ frontal P3a ၏သပ္ပါယ်ယုတ်လွှဲခွင်နှင့်အောင်းနေချိန်နှင့် centro-parietal P3b ခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဘာသာရပ် - ပျမ်းမျှလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဘာသာရပ် - ပျမ်းမျှဒေတာအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဓိကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပုံစံသည် ANOVA ၏ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ERP အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ amplitude နှင့် latency ကိုကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသောဒေသများ၏အကျိုးစီးပွား (ROI) နှင့် time window တို့အတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ P300 နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အချိန် ၀ င်းဒိုးသည် 590-300 ms အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ ရှေ့ P3a အတွက် ROI တွင် AFz, AF3, AF4, Fz, F1, F2, F3, F4 နှင့်အိမ်နီးချင်း EEG ဆိုဒ် ၄ ခု (EGI channel 10,19, 5,12) တို့ပါဝင်သည်။ လက်ဝဲ frontal ROI အနေဖြင့် front front EEG channel AF3, F1, F3, EGI-19 နှင့် EGI-12 တို့ကိုလည်းကောင်း၊ AF4, F2, F4, EGI -5နှင့် EGI - 10 ကိုညာဘက်တို့ ROI အတွက်အသုံးပြုသည်။ အလယ်အလတ် frontal EEG က်ဘ်ဆိုက်များ (AFz, Fz) အတွက်လည်းလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ centro-parietal P3b အတွက် ROI တွင် Cz, CPz, Pz, CP1, CP2, CP3, CP4 နှင့် EGI channel XNUMX ခုပါဝင်ပြီးဘယ်၊ ညာနှင့်အလယ်လိုင်း ROIs များအတွက်သီးခြားတွက်ချက်သည်။ ပုံ 1 လျှပ်စစ် Geodesics အာရုံခံ Net နှင့် ROIs ၏ layout ကိုဖော်ပြသည်။
ရုပ်သံလိုင်း NUMERIC နှင့်အတူ 2.1 ရုပ်သံလိုင်း EEG ဆိုက်များအတွက်လျှပ်စစ် Geodesics Inc ကိုအာရုံခံ Net က layout ကို (128 ဗားရှင်း) ။ တိုင်းဒေသကြီးများ-of အကျိုးစီးပွား (Roi) (P3b အစိတ်အပိုင်းများအတွက်) (P3a အစိတ်အပိုင်းများအတွက်) တိုကျရိုကျနှင့် centro-parietal မီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။
အစပိုင်းမှာအားလုံးမှီခို variable တွေကိုအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု (Sud, dual vs. CNT vs. CNT, Sud vs. dual, Sud + dual vs. CNT) ကိုရှာဖွေတလမ်း ANOVA သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါရှေးခယျြထားမှီခို ERP variable ကိုဒေတာ (အားလုံးအတွင်း-ပါဝင်သူ) ကိုအောက်ပါအချက်များနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်: စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအမျိုးအစား × (ပစ်မှတ် non-ပစ်မှတ်) × Cue Category: (ကြားနေ, မူးယစ်ဆေး, စိတ်ဒဏ်ရာ) × ကမ်ာဘလုံးခွမျး (ညာ vs. left) ။ ခဲ့ကြသည့်တာဝန်များကိုအတွက်ဘာသာရပ်အချက်များအကြား Group က (DUAL, SUD, CNT) နှင့်အောက်ပါအုပ်စုကွဲခြင်း (CNT vs. DUAL; CNT vs. SUD, DUAL vs. SUD) ။ post-hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမညီမျှမှုအရွယ်အစားနှင့်အတူအုပ်စုများအတွက် Tukey စမ်းသပ်အသုံးပြု။ ကောက်ယူခဲ့သည်။ A-a priori ယူဆချက်များသည်မတူညီသောကှဲလှဲမှုရှိသောအုပ်စုများအတွက်ကျောင်းသားနှစ် ဦး ၏ကျောင်းသား၏ t-tests နှင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ANOVA အားလုံး၌၊ မှန်လုံအိမ် - Geisser (GG) သည်မှန်ကန်သော p-values ​​များကိုသင့်လျော်သည့်နေရာတွင်အသုံးချသည်။ SPSS (v.14) နှင့် Sigma Stat 3.1 အစုအဖွဲ့များကိုစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဆိုင်ရာမြေပုံများကို EGI Net Station လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများတွင်ရရှိထားသည့်အလင်းဆုံကျောရိုးကို အသုံးပြု၍ ဖန်တီးသည် (း ၄.၀၁) ။
တုံ့ပြန်မှုအချိန် (RT ကို) 529.6 ± 55.9 ms (ထိန်းချုပ်မှု (CNT) ကိုနှိုင်းယှဉ် Sud နှင့် dual အုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးနှေးကွေးခဲ့, သို့သော်တဦးတည်း-လမ်း ANOVA သာစိတ်ဒဏ်ရာပစ်မှတ်များအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲအကြား RT ကိုကွဲပြားခြားနားမှု (Sud နှင့် dual အုပ်စုများ Sud + dual နှစ်ဦးစလုံး) ၏အရေးပါမှုကိုပြသ CNT vs. 642.6 ± 121.9 အားလုံးစွဲ, F (1,33) = 6.25, p = 0.018) ။ CNT အုပ်စုတစ်စုကြားနေနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ (စိတ်ဖိစီးမှု) အမျိုးအစားပစ်မှတ်အပေါ် dual အုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါထိုကွဲပြားမှုသည်အလွန်ကောင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုပစ်မှတ်အားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး RT ကိုအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ (517 ms စိတ်ထိခိုက်ပစ်မှတ် vs. 581 ms ကြားနေ, F (2,27) = 15.18, p = 0.001) ။ အဲဒီမှာစိတ်ဒဏ်ရာပစ်မှတ်အပေါ်အကြား-အုပ်စုတစ်စုခြားနားချက်တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ် (Dual vs. CNT, F ကို = (2,27) = 4.63, p = 0.046) လည်းဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဆိုနိုင်သည်သိသိသာသာ အမျိုးအစား (ကြားနေ, စိတ်ဒဏ်ရာ) × Group က (CNT, dual) အပြန်အလှန် (F ကို = (4,36) = 4.66, p = 0.046), အလားတူဖြစ်ခြင်းကြားနေပစ်မှတ်မှ RT ကိုအတူ RT ကို dual အုပ်စုတွင်နှေးကွေးဖြစ်ခြင်းတွေကိုစိတ်ဒဏ်ရာမှနေစဉ်။ ပစ်မှတ် အမျိုးအစား (ကြားနေ, စိတ်ဒဏ်ရာ, မူးယစ်) (ကြားနေဖို့အတိုဆုံး RT ကို, အရှည်ဆုံးစိတ်ဒဏ်ရာရန်, F (2,36) = 4.89, p = 0.016) နှိုးဆွစိတ်ခံစားမှုအမျိုးအစား၏ဤခြယ်လှယ်အားလုံးဘာသာရပ်များအတွက် RT ကိုထိခိုက်စေခဲ့ဖေါ်ပြခြင်းအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Sud နှင့် dual အုပ်စုများအကြား RT ကိုအတွက်မဆိုသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုမရှိ။
အားလုံး3အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်အမှားနှုန်းမှာဆိုမတူကွဲပြားလိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲသီးခြားစီနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်အခါ, Cue category: (ကြားနေ, စိတ်ဒဏ်ရာ, မူးယစ်) × Group က မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအပေါ် 2,27% (CNT) vs. နိမ့်အမှားနှုန်းကို 3.98% (Sud) ကိုတစ်ဦးစိတ်သဘောထားအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည့် (CNT, Sud) အပြန်အလှန်သဘောထားကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်, F (0.043) = 5.89, p = 9.25, စွဲထဲမှာကြားနေပစ်မှတ်အပေါ်မှားယွင်းမှုများ၏နှုန်းမှာ (11.5% vs. 6.6%) ။ တူညီသောတိကျမှန်ကန်မှုအတိုင်းအတာအပေါ် CNT နှင့် dual အုပ်စုများ၏နှိုင်းယှဉ်ကိုလည်းဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ပြသ အမျိုးအစား × Group က စိတ်ဒဏ်ရာပစ်မှတ်ဖို့, ဒါပေမယ့်မရမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်ကြားနေပစ်မှတ်ကိုပိုမိုအမှားအယွင်းများကျူးလွန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ dual လူနာနှင့်အတူအပြန်အလှန် (F (2,18) = 3.86, p = 0.049) ။
Sud-သာ group မှ Dual နှင့်2ဘာသာရပ်များအနေဖြင့်တဦးတည်းဘာသာရပ်အနေဖြင့်ဒေတာများကြောင့်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပိုငျးအတစ်အလွန်အကျွံအရေအတွက်ကိုဖို့ ERP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်, မျက်စိ Blink စသည်တို့ကိုထိုကြောင့်ငါတို့သည် (CNT အုပ်စုကို)9ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ဒေတာသတင်းပို့, 12 ဘာသာရပ်များ Sud-PTSD comorbidity (dual အုပ်စုကို) နဲ့ PTSD မပါဘဲ Sud (Sud အုပ်စုသည်), နှင့် 10 ဘာသာရပ်များနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ပါဝင်သည်စွဲအုပ်စုသည်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးပေါင်းစပ်စွဲအုပ်စုသည် (Sud + dual အုပ်စုကို) vs. အချို့ထိန်းချုပ်မှုသည်။
တိုကျရိုကျ P300 (P3a)
P3a ၏ amplitude
Cue Category: (ကြားနေ, စိတ်ဒဏ်ရာ, မူးယစ်) မူးယစ်ဆေးတွေကိုထဲမှာနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်, စိတ်ဒဏ်ရာအတွက် P3a အစိတ်အပိုင်းများ၏အမြင့်ဆုံးလွှဲခွင်အတူ P2,28a လွှဲခွင် (F (15.6) = 0.006, p = 3) အပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ stimulus (ပစ်မှတ် non-ပစ်မှတ်) ကိုလည်းလွှဲခွင် Non-ပစ်မှတ်ထက်ပစ်မှတ်မှပိုမိုမြင့်မားနေခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,28) = 7.33, p = 0.011) ရှိခဲ့ TYPE ။ အားလုံးစွဲ (Sud နှင့် dual အုပ်စုများ N ကို =9နှစ်ဦးစလုံး) နဲ့ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (N ကို = 21) သိသိသာသာ cue ပြသ အမျိုးအစား (ကြားနေ, စိတ်ဒဏ်ရာ, မူးယစ်) × ကမ်ာဘလုံးခွမျး × (ညာ, left) Group က အပြန်အလှန် (F (2,27) = 9.42, p = 0.001), စွဲမူးယစ်ဆေးတွေကိုမှမဟုတ်ဘဲကြားနေတွေကိုမှပိုကြီး P3a ပြပြီး, လျော့နည်း hemisphere ကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှားရှိရာ။ ကိန်းဂဏန်းများ Figures22 နှင့် and33 ကိုကင်းစွဲထဲမှာ Non-ပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမှ P3a မြင့်မားလွှဲခွင်ဖော်ပြသည်။ တိုးမြှင့် P3a ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းညာဘက်တိုကျရိုကျ site ကိုမှာမဟုတ်ဘဲထို့နောက်ဘယ်ဖက်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ F ကို (9) = 12, p = 2,18: ထိန်းချုပ်မှု (CNT, N ကို = 4.12) PTSD မပါဘဲစွဲ (Sud, N ကို = 0.03) နဲ့နှိုင်းယှဉ်သောအခါတူညီသက်ရောက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Non-ပစ်မှတ်ကြားနေ, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုထိန်းချုပ် (N ကို = 3) နှင့်ပေါင်းစပ်စွဲ (N ကို = 9) အုပ်စုများဖို့တိုကျရိုကျ P21a အစိတ်အပိုင်း၏ amplitude ။ စွဲဘာသာရပ်များ Non-ပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှအလွန်အကျွံ reactivity ကိုပြသပါ။
ဘာသာရပ်များသုံးခုအုပ်စုများအတွက်ပစ်မှတ်ထားနှင့် Non-ပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှတိုကျရိုကျ ERP ။
ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် dual-ရောဂါအုပ်စုများ၏နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦး cue ပြသ အမျိုးအစား (ကြားနေ, စိတ်ဒဏ်ရာ, မူးယစ်) × stimulus(ပစ်မှတ် non-ပစ်မှတ်) × Group က (CNT, dual) အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (2,38) = 4.52, p = 0.038, GG DF = 1.19 တညျ့) နှင့်တစ်ဦးကောင်းစွာထင်ရှား အမျိုးအစား × ကမ်ာဘလုံးခွမျး × Group က အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (2,38) = 8.14, p = 0.005) ။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မယ့်လက်ျာတိုကျရိုကျက်ဘ်ဆိုက်များမှာ Non-ပစ်မှတ်ထက်စိတ်ဒဏ်ရာပစ်မှတ်ဖို့ပိုမိုကြီးမား P3a နှင့်ပစ်မှတ်ထက်ကြားနေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Non-ပစ်မှတ်မှနိမ့်လွှဲခွင်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ပုံ4ဒီ cue ပြသ အမျိုးအစား × Group က ပစ်မှတ်ထိန်းချုပ်တွေကိုနှင့် dual-ဘာသာရပ်များများအတွက်အပြန်အလှန်။
ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့် dual-လူနာ (PTSD နှင့်အတူ Sud) တွင်ကြားနေ, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပစ်မှတ်ဖို့တိုကျရိုကျ P3a အစိတ်အပိုင်း၏ amplitude ။ အဆိုပါ dual-လူနာစိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု-related တွေကိုမှအလွန်အကျွံ reactivity ကိုပြသပါ။
P3a ၏ latency
one-way ANOVA (F (3) = 2,29, p = 4.32) ကြားနေပစ်မှတ်မှ P0.022a ၏အောင်းနေချိန်များတွင်သုံးအုပ်စုများ (CNT, Sud, dual) အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြစိတ်ထိခိုက်ပစ်မှတ် (F (2,29) = 3.71, p = 0.036) နှင့် Non-ပစ်မှတ် (F (2,29) = 7.65, p = 0.002), မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ် (F (2,29) = 4.55, p = 0.019), နှင့်မူးယစ်ဆေး Non-ပစ်မှတ် (လက်ျာဘက်၌မှာသာ, F (2,29) = 4.74, p = 0.016) ။ Sud နှင့် dual အုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်မှုထက်မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်နှင့် Non-ပစ်မှတ်မှမဟုတ်တော့ latency ခဲ့သော်လည်း dual လူနာကြားနေပစ်မှတ်နှင့် Non-ပစ်မှတ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ P3a အောင်းနေချိန်ပြသခဲ့သည်။ အများစုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကွဲပြားခြားနားမှုစွဲသာ dual-လူနာအုပ်စုများ vs. ၏နှိုင်းယှဉ်ကာလအတွင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်။ stimulus အမျိုးအစား (ပစ်မှတ် non-ပစ်မှတ်) အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ (F (1,20) = 5.52, p = 0.03), ဒါပေမယ့် cue အမျိုးအစား (ကြားနေ, စိတ်ဒဏ်ရာ, cue) ဤအုပ်စုများအတွက်အောင်းနေချိန်မအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ stimulus × အမျိုးအစား × Group က (Sud, dual) (F (2,38) = 5.56, p = 0.014) သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်လြှော့။ (အထူးသဖြင့်, P3a အောင်းနေချိန်တကမ္ဘာလုံးနှစ်ဦးစလုံး Sud လူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပစ်မှတ်ထားနှင့် dual လူနာ Non-ပစ်မှတ်တွေကိုနှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်နှင့် Non-ပစ်မှတ်စိတ်ဒဏ်ရာမှမဟုတ်တော့ပဲနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားပုံ 5).
ဘာသာရပ်များသုံးခုအုပ်စုများ (CNT, Sud, dual) တွင်ပစ်မှတ်ထားနှင့် Non-ပစ်မှတ်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု-related တွေကိုမှတိုကျရိုကျ ERP ။ အဆိုပါ dual အုပ်စုသည်ပိုမိုမြင့်မားပြပစ်မှတ်နှင့် Non-ပစ်မှတ်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဓါတ်ပုံတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးမှ P3a နှောင့်နှေး။
Centro-parietal P300 (P3b)
P3b ၏ amplitude
cue နှစ်ဦးစလုံး အမျိုးအစား (က F (2,28) = 56.01, p = 0.006) နှင့် stimulus အမျိုးအစား (ပစ်မှတ် non-ပစ်မှတ်) (F (1,29) = 7.32, p = 0.011) P3b ၏လွှဲခွင်ပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ထင်ရှားထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲအကြား P3b နှိုင်းယှဉ်ရန် stimulus (ပစ်မှတ် non-ပစ်မှတ်) × ကမ်ာဘလုံးခွမျး × (ညာ, left) Group က (CNT အပေါင်းတို့, Sud) အပြန်အလှန်, F (2,58) = 4.21, p = 0.03 ။ , လူနာအုပ်စုတစ်စုတစ်ဦးကြားနေဖို့, ဒါပေမယ့်မရမူးယစ်ဆေးတွေကိုမှနိမ့် P3b နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းထူးခြား hemisphere ကွဲပြားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ စွဲအတွက် P3b လွှဲခွင်လက်ဝဲ hemisphere မှာမူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားတွေကိုတုန့်ပြန်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ တစ်ဦးက stimulus × ကမ်ာဘလုံးခွမျး × Group က CNT နှင့် dual အုပ်စုများ (; GG တညျ့, DF = 2,38, p = 3.86 က F (0.031) = 1.59, p = 0.042) နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါအပြန်အလှန်အဖြစ်ကောင်းစွာရှာတွေ့ခဲ့သည်။
P3b ၏ latency
ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုပြသ ကမ်ာဘလုံးခွမျး × Group က အပြန်အလှန် (F (1,28) = 4.84 အပေါင်းတို့, Sud vs. p = 0.036 CNT) ။ (က F (1,28) = 5.40, p = 0.028) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘယ်မှာရှိသည့်အခါ CNT နှင့် Sud-သာအုပ်စုတစ်စုကဤအောက်ပိုင်းလက်ဝဲလက်ျာခြမ်းကွဲပြားခြားနားမှုပိုကောင်းမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုနိုင်သည်နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် CNT နှင့် dual အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါအဓိပ်ပာယျအဆငျ့ရောက်ရှိမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုဟာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအကဲဖြတ် cortical ဆားကစ်စွဲအုပ်စုတစ်စု (မူးယစ်ဆေး cue reactivity ကို) တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှအေးစက်နှင့်ကိုကင်းစွဲခြင်းနှင့် PTSD comorbidity နှင့်အတူလူနာအုပ်စု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးမှအေးစက်ခဲ့ကြသောအယူအဆ (မူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီး - နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-cue reactivity ကို) ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျ P3a နှင့် centro-parietal P3b အစိတ်အပိုင်းများဘာသာရပ်များအပေါငျးတို့သအုပ်စုများ (CNT, Sud, dual) တွင်ရုပ်ပုံများကိုအသီးအသီးအမျိုးအစားထဲမှာ Non-ပစ်မှတ်ထက်ပစ်မှတ်မှပိုကြီးဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့် P3a နှင့် P3b drug- မှပိုကြီးဖြစ်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည် PTSD မပါဘဲထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကိုကင်းစွဲနှိုင်းယှဉ် dually ရောဂါဘာသာရပ်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံး drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related အမျိုးအစားမှပိုမိုကြီးမားသော်လည်း, ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (ပစ်မှတ်နှင့် Non-ပစ်မှတ်နှစ်မျိုးလုံး) Sud-သာအုပ်စုတွင်တွေကို related ။ အထူးသထိုကဲ့သို့သောဟောကိန်းများလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား (ပစ်မှတ် non-ပစ်မှတ်), ပစ်မှတ်ဖို့ပိုမိုကြီးမား P300 များအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေခြင်းယူဆပေမယ့်မပါ stimulus × Group က အပြန်အလှန်။ တူညီတဲ့အမျိုးအစားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတစ်ခုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုခန့်မှန်း အမျိုးအစား (ကြားနေ, စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်), နှင့်တစ်ဦး အမျိုးအစား × Group က အဆိုပါ dual အုပ်စုတွင်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုပုံရိပ်တွေမှ interaction က, ကိုကင်းစွဲနှစ်ခုစလုံးအုပ်စုများအတွက်မူးယစ်ဆေးပုံရိပ်တွေမှအမည်ရပိုကြီး ERPs (Sud, dual), နှင့်အကျိုးစီးပွားပိုမိုကြီးမား ERPs အုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် Sud မှနှစ်ဦးစလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောကိန်းများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆိုပါရရှိသောရလဒ်များသည်ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ (လှုံ့ဆော်မှုပစ်မှတ်ထားဖို့အတှကျအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာဟောကိန်းထုတ်ပိုကြီး P3a နှင့် P3b အစိတ်အပိုင်းများကိုပြသ နှိုးဆွ), မသက်ဆိုင်လှုံ့ဆော်မှုများ အမျိုးအစား (ကြားနေ, စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်), အစွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, Non-ပစ်မှတ်စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှ reactivity ကိုထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်စွဲအုပ်စုများအတွက်တကမ္ဘာလုံးပိုမိုမြင့်မားခဲ့သော်လည်း။ အများအပြားကပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက် interaction က (stimulus × အမျိုးအစား × Group က; ခြမ်း× Group မှ× category) စှဲလမျးသူအုပ်စုများထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ P3a ၏လွှဲခွင်နှင့်အောင်းနေချိန်များအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ dual လူနာအရှင် dually ရောဂါလူနာအတွက်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုဖို့တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်နှင့်အရှေ့တိုင်း supporting, အရေးပါမှုကိုရောက်ရှိကြောင်း (differential ပစ်မှတ်နှင့် Non-ပစ်မှတ်ရန်) စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုမှ P3a ၏ဟောကိန်းထုတ်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့သည်။ PTSD မပါဘဲစွဲလူနာအုပ်စု P3a ချဉ်းကပ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့ (အစာစားချင်စိတ်) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသောလက်ဝဲ hemisphere မှာပိုမိုကြီးမားဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး cue အမျိုးအစားဖို့ခန့်မှန်းပိုကြီးတိုကျရိုကျ P3a ပြသလှုံ့ဆျောမှုသဘောထားတွေကို (Davidson, 2002) ။ အဆိုပါ centro-parietal P3b ဆင်တူပေမယ့်ဒီထက်သိသာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာပြသသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည် အမျိုးအစား × Group က အဆိုပါ P3a comorbid PTSD နှင့်အတူကင်းစွဲအတွက် cue drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related လှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့အညွှန်းကိန်းဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုဟာတိုကျရိုကျ P3a ထက်ဆိုးကျိုးများ။
တက်ကြွကင်းအသုံးပြုသူများနှင့်လေ့လာမှုများ (မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအားကြီးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုညွှန်ပြခဲ့ကြပေမယ့်Carter ကနှင့် Tiffany, 1999။ , Childress et al, 1993; ပေးသနား et al ။ , 1996လန်ဒန် et al ။ , 1999), ကိုကင်း-related လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကိုဆန်းစစ်သုတေသန (ကန့်သတ်ထားပြီးFranken et al ။ , 2000) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု dually ရောဂါလူနာအုပ်စု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-ဆက်စပ်နှစ်ဦးစလုံးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အတိုင်းအတာတိုးချဲ့။ ရရှိသောဒေတာများ PTSD မပါဘဲကင်းစွဲထဲမှာစိတ်ခံစားမှုကြားနေနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပုံရိပ်တွေမှလျှော့ reactivity ကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာ psychostimulant ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားပြုသူများကအဆိုပါစိတ်ခံစားမှုရဲ့အတှေ့အကွုံပုစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်နှောက်ယန္တရားများ (များ၏ dysregulation ၏ရလဒ်အဖြစ်ပုံပျက်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်Goldstein & Volkow, 2002; Volkow et al ။ , 2004) ။ ရလဒ်ကိုကင်းစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသဘာဝကိုထိခိုက်လှုံ့ဆော်မှုမှအနိမ့် activation ထုတ်လုပ်ရန်အခြားလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်မူးယစ်ဆေး-related ပစ္စည်းများမှတုန့်ပြန်တွင်ဤဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလက်ရှိမြင့်မားသော activation (Garavan et al ။ , 1999, 2000; ပေးသနား et al ။ , 1996; Hester, Dixon က, & Garavan, 2006).
ဒါဟာ (မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆက်နွယ်လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့စိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်၏ထိခိုက်မခံတဲ့တဏှာ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီBonson et al ။ , 2002; ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 1993), ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားသောသဘာဝအလျောက်အားဖြည့်ရန်အစိတ်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတားစီးနှိုးဆော်ခြင်းနိုင်သည့်။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များတစ်ခုမှာအညီ conceptualized နိုင်မူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး paraphernalia နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးမှီခိုပုဂ္ဂိုလ်များ၏အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါသည် Franken (2003) တစ်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုကင်းစွဲခုနှစ်, ကိုကင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး paraphernalia နှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများအကြိမ်ကြိမ်သတိအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အာရုံစူးစိုက်မှုကရွေးချယ်နေကြတယ်, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုအချိုးအစားမမျှသက်ဆိုင်ရာအဖြစ် tagged နေကြသည်။
အဓိကလှုံ့ဆော်မှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုညံ့ဖျင်းထိန်းချုပ်ထားဖြစ်သောတစ်သွယ်ဝိုက်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်တွေးဆသည်။ ထိုသို့သောအလိုအလျှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဝတ္ထု signal ကိုရန် Oriental တုံ့ပြန်မှုဆင်တူသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏အလိုအလျှောက်သဘာဝ (အခြားလေ့လာမှုများအားဖြင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဖော်ပြထားခဲ့သည်Hester, Dixon က, & Garavan, 2006; Lubman et al ။ , 2000) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု-related အဆိုပါ medial prefrontal cortex (PFC) တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြီး-စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်း၌၎င်း, အထူးသညျအခွားအားလုံးတွန်းအားများနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏တားစီးအတွက်ချို့ယွင်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်စွဲလမ်းထက် (လန်ဒန် et al ။ , 2000; Shalev, Grimm, & Shaham, 2002) ။ အဆိုပါနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ဆားကစ်၏လျော့နည်းသွား PFC ထိန်းချုပ်မှုအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုကျော်ယူနိုင်ရန် posterior နှင့် subcortical (ဥပမာ, Basal ganglia, striatum) အဆောက်အဦများကကမကထပြုခဲ့ပိုပြီးလေ့တုံ့ပြန်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။
သွယ်ဝိုက်အော်တိုဖြစ်စဉ်များကိုလည်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်တစ်ဦးဆုံသက်သေအထောက်အထား (ရှိပါသည်Mogg & Bradley, 1998) ။ Neuroimaging လေ့လာမှုများ medial prefrontal cortical ဒေသများ (ထို amygdala နှင့်အတူ inhibitory ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်တုံ့ပြန်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် modulate ကြောင်းပြသDavidson, 2002; Devinsky et al ။ , 1995) ။ ဒါဟာ (prefrontal နှင့် limbic အဆောက်အဦများ၏အပြန်အလှန်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု PTSD အတွက်ကြောက်ရွံ့သုဉ်း၏ပျက်ကွက်တစ်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်Bremner et al ။ , 1996, 1999, 2004) ။ PTSD မကြာခဏ Hyper-တုံ့ပြန်မှု amygdala ကကမကထပြုခဲ့တိုးမြှင်စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်ဝယ်ယူနှင့်အတူ Conditions ကိုကွောကျရှံ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ conceptualized နှင့်ကြောင့် medial PFC နှင့် amygdala ကျော် anterior cingulate cortex (ACC) (၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပျက်ကွက်မှမျိုးသုဉ်းနှောင့်နှေးနေသည်Charney et al ။ , 1993; ဂိလဗော et al ။ , 2004; Grillon et al ။ , 1998; လီ & Sinha, 2008; Rauch et al ။ , 1996) ။ ဤရွေ့ကား PFC လိုငွေပြမှုနောက်ထပ် (ဖြင့် PTSD ရောဂါလက္ခဏာများ၏အကြိမ်ရေနှင့်ပြင်းထန်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း, amygdala hyperactivation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါBremner et al ။ , 1999) ။ အနုတ်လက္ခဏာ PTSD များအတွက်ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျ (တဏှာတိုးပွားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာခြင်းနှင့် relapse အပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်စေခြင်းငှါGoeders, 2003; Koob, 1999) ။ dually ရောဂါတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးတွေကိုမှ reactivity ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများအတွက်အားနည်းချက်တိုးပွါးသောပေါင်းစပ်အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိတုံ့ပြန်မှုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲအထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှုတိုကျရိုကျစေပါတယ်။ ချို့တဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုခိုင်မာတဲ့လေ့မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကို override တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်တွေကိုဤသို့ပြင်ပအဓိကတွေကို (မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုနှင့် drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related comorbid PTSD တစ်ဦးအမှု၌နှစ်ဦးစလုံး) ခွင့်ပြု, နှင့်ရောဂါဗေဒတဏှာ (ကြောက် PTSD) drive ကိုအပြုအမူ။ မျိုးရိုးဗီဇအမူအကျင့် disinhibition မှ predisposed တစ်ဦးချင်းစီ (ထကြွလွယ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့ပိုအားနည်းချက်ရှိပါတယ်Bauer က 1997) ။ လျှော့ချ prefrontal inhibitory ထိန်းချုပ်မှုရလဒ်များကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပယ်ဖျက်ဖို့လျော့နည်းသွားစွမ်းရည်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယေဘုယျအားဖြင့်ဆင်းရဲသားကိုစိတ်ဖိစီးမှု (Koob & Le Moal, 2001; လီ & Sinha, 2008; Sinha et al ။ , 1999) ။ ထို့ကြောင့်, စွဲလမ်းအပြုအမူသဘာဝအားဖြည့်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမူးယစ်ဆေး-လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆျောမှုမှ Hyper-sensitive ကြောင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများအတွက်မညီမမျှအတွက်ရရှိလာတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မူမမှန်စေပါတယ်။ PTSD နောက်ထပ်စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု-related ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပြင်ပပြည်တွင်းရေးတွေကို (ဥပမာ flashbacks, စိတ်ဖိစီးမှု-related အမှတ်တရများနှင့်မွေးမြူရေး, etc) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှတိုးမြှင့် reactivity ကိုတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို၏ပြင်းထန်မှုမှပံ့ပိုးသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောအဆောက်အဦများတွင်တက်ကြွစွာကင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုကင်းဆုတ်ခွာ-related ပွောငျးလဲကောင်းစွာ (လူသိများကြသည်Koob et al ။ , 2004), နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်တွင်ဤ neuroadaptave စသောအပြောင်းအလဲအညီ လီများနှင့် Sinha (2008), မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှု၏စိန်ခေါ်မှုသို့မဟုတ် "စိတ်ဖိစီးမှု" အခြေအနေများအမျိုးမျိုးအတွက်တိုးမြှင့်လောင်ကျွမ်းစေခြင်းငှါ (Robinson & Berridge, 2000; Sinha, 1999) ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် cortico-striatal-limbic ဆားကစ်အတွက်စွဲ-related ပြောင်းလဲလျှော့ချကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း, psychoactive လှုံ့ဆော်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးပွားလာအဆင့်ဆင့်စဉ်အတွင်းစွမ်းရည်ဖြေရှင်းရေးဆင်းရဲသောသူသည်အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လစ်လပ်ပြဿနာ (အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါလည်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်လီ & Sinha, 2008; Sinha et al ။ , 2006).
ဤစီမံချက်သည်ဖြစ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အလားအလာနှင့်အမူအကျင့် (တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်တိကျမှု) ၏တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များကိုကိုကိုင်းသုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်အတူ comorbid PTSD နှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ဒါဟာစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများတွေကိုအသုံးပြုတဲ့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းကိုကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ PTSD မှာသိမြင်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအကဲဖြတ်ရန်အလားအလာရှိသောအသုံးဝင်သောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပြသထားတယ် ဤရွေ့ကား ERP နှင့်အမူအကျင့် parameters တွေကိုဖြစ်ကောင်း pharmacologic နှင့်အပြုအမူနှင့် neurofeedback ကြားဝင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်လက်တွေ့နှင့်သုတေသနရလဒ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်အလုပ်နိုင်ပါတယ်အသုံးဝင်သောအစီအမံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤစိတ်ရောဂါနှင့် ERP အခြေပြုသိမြင်မှုဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုအကဲဖြတ်မှုများသည်ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းသူအများစုသည် neurofeedback နှင့်စိတ်အားထက်သန်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဘက်ပေါင်းစုံအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုသမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွင်တက်ရောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောကြောင့်စားသုံးမှုအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ပလူနာများ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤရလဒ်သည်ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအကြား neurobiologic အပြန်အလှန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ထို့အပြင်သိမှုဆိုင်ရာ neuroscience နည်းစနစ်များနှင့်သီအိုရီများကို အသုံးပြု၍ Dual Diagnosis ၏ဤအထူးပုံစံ၏မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုကိုရှင်းပြသည့်ပုံစံအတွက်အခြေခံကိုပေးသည်။
PTSD မပါဘဲထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကိုကင်းစွဲအားလုံးကိုကြားနေ, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုဖို့ centro-parietal P3b ၏ amplitude ။
ပစ်မှတ်ထားဖို့ Centro-parietal ERP နှင့်ဘာသာရပ်များသုံးခုအုပ်စုများအတွက် Non-ပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေးတွေကို။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Sud နှင့် dual အုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးထံမှကင်းစွဲ Non-ပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှပိုမိုမြင့်မား reactivity ကိုပြသပါ။
Non-ပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေးတွေကိုတုံ့ပြန်အတွက်တိုကျရိုကျနှင့် parietal ROIs မှာ event-related အလားအလာ။ Sud နှင့် dual အုပ်စုများထံမှကိုကင်းစွဲဟာတိုကျရိုကျရွယ်မှာပိုမိုမြင့်မား cue reactivity ကိုရှိသည်။
ဤလေ့လာမှု ISNR သုတေသနကော်မတီထောက်ပံ့ငွေနှင့် Tato Sokhadze ဖို့ NIDA R03DA021821 ထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်။
American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ (DSM-IV) 4th ed ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1994 ။
Attias J ကို, Bleich တစ်ဦးက, Furman V ကို, တိုက်ခိုက်ရေးမူရင်း Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက် Zinger Y. Event-related အလားအလာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996; 40: 373-381 ။ [PubMed]
Bauer LO ။ တိုကျရိုကျ P300 လျှော့, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကငျြ့ရောဂါ, မိသားစုသမိုင်းနှင့် abstinent ကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများအကြား relapse ၏ဓာတ်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 1997; 44: 1-10 ။ [PubMed]
Bauer LO, Kranzler HR ။ ကိုကင်း-မှီခိုပြင်ပလူနာအတွက် electroencephalograph လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်ဓါတ်များ: ကင်း cue ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဟားဗတ်။ 1994; 36: 189-197 ။ [PubMed]
Biggins, CA, Mackay က S, Clark ကဒဗလျူ, နာတာရှည်ကင်းမှီခို၏တိုကျရိုကျ cortex သက်ရောက်မှုများအတွက် Fein G. အ Event-related အလားအလာသက်သေအထောက်အထား။ ဟားဗတ်။ 1997; 42: 472-485 ။ [PubMed]
Blanchard ဖြစ်ပြီး eb ။ PTSD နှင့်အတူဗီယက်နမ်စစ်ပြန်အတွက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ elevated Basal အဆင့်ဆင့်: အချမှတ်ခြင်းအတွက်ကျန်းမာရေးပြဿနာ? ဂျေတော့ပူပန် disorders ။ 1990; 4: 233-237 ။
Blanchard ဖြစ်ပြီး eb, Hickling EJ, Buckley TC, တေလာ AE, Dana Vollmer ကတစ်ဦးကလြော့ရဲ WR ။ ပွားများနှင့် extension ကို: posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှု၏ psychophysiology ။ ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol ။ 1996; 64: 742-751 ။ [PubMed]
Bleich တစ်ဦးက, Attias J ကို, Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက်အဖြစ်အပျက်-related P3 ဦးနှောက်အလားအလာအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲအမြင်အာရုံစိတ်ထိခိုက်လှုံ့ဆော်မှု၏ Furnam V. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ int J ကိုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1996; 85: 45-55 ။ [PubMed]
Blomhoff S က, Reinvang ငါ Malt UF ။ posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုလူနာအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုနှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုမှအဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ။ ဟားဗတ်။ 1998; 44: 1045-1053 ။ [PubMed]
Bonson KR, Grant က SJ, Contoreggi CS, et al JM, Metcalfe J ကို, Links ။ အာရုံကြောစနစ်များနှင့် cue- သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26 (3): 376-386 ။ [PubMed]
Bremner JD, Southwick သည် SM, တောမြိုးစေ့တစ်ဦးက, Charney DS ။ ဗီယက်နမ်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပြန်အတွက်နာတာရှည် PTSD: နာမကျန်း၏သင်တန်းများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1996; 153: 369-375 ။ [PubMed]
Bremner JD, Staib LH, Kaloupek: D, Southwick သည် SM, Soufer R ကို, Charney DS ။ တစ်ဦးက positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှုနှင့် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါမရှိဘဲဗီယက်နမ်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပြန်အတွက်စိတ်ထိခိုက်ပုံနဲ့အသံထိတွေ့ခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 45: 806-816 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bremner JD, Vermetten အီး, Vythilingam M က, Afzal N ကို, Schmahl ကို C, Elzinga B, Charney DS ။ အာရုံကြောအလွဲသုံးစားမှု-related posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဂန္အရောင်နဲ့စိတ်ခံစားမှု stroop ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဟားဗတ်။ 2004; 55: 612-620 ။ [PubMed]
ဘရောင်း PJ, ဝံပုလွေဂျေပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ comorbidity ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်။ 1994; 35: 51-59 ။ [PubMed]
ဘရောင်း PJ, Recupero PR စနစ်, ရဲရငျ့စှာပွော R. PTSD-ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု comorbidity နှင့်ကုသမှုအသုံးချ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 1995; 20: 251-254 ။ [PubMed]
Carter က BL, Tiffany ST ။ စွဲသုတေသနအတွက် cue-reactivity ကို၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲလမ်း။ 1999; 94: 327-340 ။ [PubMed]
Casada JH, Amdur R ကို, Larsen R ကို, posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက် Liberzon ဗြဲ Psychophysiologica Response: စိတ်ဒဏ်ရာတိကျတဲ့နှိုင်းယှဉ်ယေဘူယျ hyperresponsiveness ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 44: 1037-1044 ။ [PubMed]
ချားလ်စ်, G, Hansenne M က, Ansseau M က, Pitchot W က, Machowski R ကို, Schittecatte M က, Wilmotte ဂျေ P300 posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါပါ။ Neuropsychobiology ။ 1995; 32: 72-74 ။ [PubMed]
Charney DS, Deutch AY, Krystal JH, Southwick သည် SM, Davis ကအမ် Psychobiologic posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါယန္တရားများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1993; 50: 295-305 ။ [PubMed]
Chilcoat HD ကို Breslau N. Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမမှန်: ပေါ့ပေါ့လမ်းကြောင်းစမ်းသပ်။ မော်ကွန်းအထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 55: 913-917 ။ [PubMed]
Childress AR, Mozley: D, McElgin W က, Fitzgerald J ကို, Reivich M က, et al ။ cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Limbic activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 11-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Coffey SF, Saladin ME, Drobes DJ သမား, Brady KT, Dansky BS, Kilpatrick DG ။ comorbid posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်ကိုကင်းသို့မဟုတ်အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ cue reactivity ကို။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2002; 65: 115-127 ။ [PubMed]
ကော့ WM, Fadardi JS, Pothos EM ။ အဆိုပါစွဲ-stroop စမ်းသပ်: သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြံပြုချက်များ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 2006; 132: 443-476 ။ [PubMed]
Davidson RJ ။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေစတိုင်: prefrontal cortex နဲ့ amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဟားဗတ်။ 2002; 51: 68-80 ။ [PubMed]
Devinsky အို Morrell MJ, Vogt BA ဘွဲ့။ အပြုအမူမှ anterior cingulate cortex ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ ဦးနှောက်။ 1995; 118 (1): 279-306 ။ [PubMed]
Derogatis LR, Lipman ကို RS, Rickels K ကို Uhlenhuth Eh, Covi အယ်လ်အဆိုပါ Hopkins လက္ခဏာတွေစာရင်း (HSCL): တစ် Self-အစီရင်ခံစာလက္ခဏာစာရင်း။ သိပ္ပံပြုမူနေ။ 1974; 19: 1-15 ။ [PubMed]
Donchin အီး, Cole MGH ။ အဆိုပါ P300 အခြေအနေတွင်မွမ်းမံတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းလား? ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1988; 11: 357-374 ။
ME Drake, Pakalnis တစ်ဦးက, Phillips က B, Pamadan H ကို, Hietter လုပ် SA ။ အာရုံစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါအတွက်အလားအလာ evoked ။ Clin ။ Electroencephalogr ။ 1991; 22: 97-101 ။ [PubMed]
Drummond, DC, Tiffany ST, Glautier S ကို Remington ခကိုစှဲအပြုအမူ: Cue Exposure သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်။ Wiley; Chichester: 1995 ။
အီဗန် K ကို Sullivan က JM ။ dual Diagnosis ။ Guilford စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်, NY: 2001 ။
Fein, G, Bigging ကို C, Mackay အက်စ်ကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများကပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရက်သမားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အာရုံ P50 လွှဲခွင်နှင့်ဖိနှိပ်မှုလျှော့ပါပြီ။ ဟားဗတ်။ 1996; 39: 955-965 ။ [PubMed]
Felmingham KL, Bryant RA, Kendall ကို C, posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက်ဂေါ်ဒွန်အီး Event-related အလားအလာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ထုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန။ 2002; 109: 171-179 ။ [PubMed]
ပထမ ဦး ဆုံး MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW လူနာထုတ်ဝေမှု (SCID - I / P) နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန - DSM-IV-TR ဝင်ရိုး ၁ မမှန်ရောဂါအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူး၊ နယူးယောက်: 2001 ။
Foa eb, Steketee, G, Rothbaum bo ။ Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ၏အမူအကျင့် / သိမြင် conceptualisations ။ အပြုအမူကုထုံး။ 1989; 20: 155-176 ။
Foa eb, Cashman L ကို, Jaycox L ကို, ပယ်ရီ K. posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအဆိုပါ Posttraumatic Diagnostic စကေး၏ Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာ၏အတညျပွု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်။ 1997; 9: 445-451 ။
Franken ih, က de Haan HA, ဗန် der Meer CW, Haffmans pm တွင်, Hendrik VM က။ Cue reactivity ကိုနှင့် abstinent posttreatment မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအတွက် cue ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဂျာနယ်ပစ္စည်းကုသမှုအလွဲသုံးစားပြုမှု။ 1999; 16: 81-85 ။ [PubMed]
Franken IHA, Kroon Ly, Hendrik VM က။ တဏှာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုလူနာအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကိုကင်းအတှေးအများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2000; 25 (1): 99-102 ။ [PubMed]
Franken IHA ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်စွဲ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် psychopharmacological ချဉ်းကပ်မှုပေါင်းစပ်။ တိုးတက်မှုကို Neuro-ဆေးဝါးဗေဒဟားဗတ်။ 2003; 27: 563-579 ။ [PubMed]
Friedman: D, Simpson GV, ဝတ္ထုနှင့်ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုမှဦးရေပြားမြေမျက်နှာသွင်ပြင်အတွက် Hamberger အမ်ခေတ်-related အပြောင်းအလဲများကို။ Psychophysiology ။ 1993; 30: 383-396 ။ [PubMed]
schizophrenia များအတွက်အန္တရာယ်၏အညွှန်းကိန်းများအဖြစ် Friedman: D, Squires-ဝီအီးပွဲနှင့်ပတ်သက်သောအလားအလာ။ Schizophr Bull ။ 1994; 20: 63-74 ။ [PubMed]
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများတွင် Fukunishi ဗြဲ Alexithymia: စိတ်ကျရောဂါမှဆက်ဆံရေးမျိုး။ Psychol ။ ။ ကိုယ်စားလှယ် 1996; 78: 641-642 ။ [PubMed]
Gaeta H ကို, Friedman: D, Hunt က G. အ stimulus ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တာဝန်အမျိုးအစားအသစ်အဆန်း P3 ၏ anterior နှင့် posteriror ရှုထောင့် dissociate ။ Psychophysiology ။ 2003; 40: 198-208 ။ [PubMed]
Garavan H ကို, Pankiewicz J ကို, Bloom တစ်ဦး, ချို JK, Sperry L ကို, et al ။ Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 157: 1789-1798 ။ [PubMed]
Garavan H ကို, ရော့စ်တီဂျေ, Stein EA ၏။ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုညာဘက် hemisphere ကြီးစိုး: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ တရားစွဲဆိုမှုအမျိုးသားအကယ်ဒမီသိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1999; 96: 8301-8306 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂိလဗောတစ်ဦးက, Shalev AY, Laor L ကို, မျ့ဘဲလျ H ကို, Louzoun Y ကို, Chisin R ကို, Bonne O. Functional အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက် amygdala ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 55: 263-272 ။ [PubMed]
Goeders NE ။ စွဲလမ်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology ။ 2003; 13 (6): 435-441 ။ [PubMed]
စတိန်း R ကို, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-1652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာကာလအတွင်းက S, လန်ဒန် ED, NEWLINE DB, Villemagne VL, လျူက X, Contoreggi ကို C, Phillips က RL, Kimes AS, မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ Margolin အေ Activation ပေးသနား။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1996; 93: 12040-12045 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grillon ကို C, မော်ဂန်, CA, Davis က M ကို, Southwick သည် SM ။ posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူဗီယက်နမ်စစ်ပြန်အတွက် acoustic ထိတ်လန့်အပေါ်စမ်းသပ်အခြေအနေတွင်နှင့်အကဲဆတ်သောခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုဆိုးကျိုးများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 44: 1027-1036 ။ [PubMed]
Handelsman L ကို, Stein ဂျာ Bernstein DP, Oppenheim SE, ဘလမ်တစ်ဦးက, Magura အက်စ်ပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်စိတ်ခံစားမှုလိုငွေပြမှု coexisting ၏တစ်ဦးကငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: alexithymia, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့် PTSD ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2000; 25: 423-428 ။ [PubMed]
Herning RI က, ဂလိုဗာ BJ, ကိုကင်းချိုးဖောက် P3B အပေါ်ကိုကင်းများ၏ Guo X တို့မှာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychobiology ။ 1994; 30: 132-142 ။ [PubMed]
Hester R ကို, စွဲလမ်းအတွက် Garavan အိပ်ချ်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု: စိတ်တိုးပွားတိုကျရိုကျအဘို့သက်သေသာဓက, cingulate နှင့် cerebellar လှုပ်ရှားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2004; 24: 11017-11022 ။ [PubMed]
Hester R ကို, Dixon က V ကို, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Stroop အလုပ်တခုကို၏စကားလုံးနှင့်ရုပ်ပုံဗားရှင်းကိုဖြတ်ပြီးတက်ကြွကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်မူးယစ်ဆေး-related ပစ္စည်းများအတွက် Garavan အိပ်ချ်တစ်ဦးကတသမတ်တည်းဘက်လိုက်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2006; 81: 251-257 ။ [PubMed]
Jacobsen LK, Southwick S က, Kosten TR ။ posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်။ အမေရိကန် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 1184-1190 ။ [PubMed]
Johnson က BA, ချန်နှစ်, Schmitz J ကို, Bordnic P ကို, ကိုကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် Shafer အေ Cue reactivivty: cue အမျိုးအစားနှင့် cue နည်းလမ်း၏ဆိုးကျိုးများ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 1998; 23: 7-15 ။ [PubMed]
ကားလ်တစ်ဦးက, မော်လ်တာ LS, Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက်အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာလေ့လာမှု Maerker အေတွင် Meta-သရုပ်ခွဲ reviw ။ Biol စိတ်ပညာ။ 2006; 71: 123-147 ။ [PubMed]
Katayama J ကို, one- ထံမှ Polich ဂျေ P300, two- နှင့်သုံးလှုံ့ဆော်မှုအာရုံ Paradigm ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ J ကို Psychophysiology ။ 1996; 23: 33-40 ။ [PubMed]
Katayama J ကို, Polich ဂျေ stimulus အခြေအနေတွင် P3a နှင့် P3b ဆုံးဖြတ်သည်။ Psychophysiology ။ 1998; 35: 23-33 ။ [PubMed]
Kimble M က, Kaloupek: D, Kaufman က M, Deldin P. stimulus အသစ်အဆန်း differential PTSD အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခွဲဝေသက်ရောက်သည်။ ဟားဗတ်။ 2000; 47: 880-890 ။ [PubMed]
Kilts CD ကို, Schweitzer JB, Quinn CK, စုစုပေါင်း RE, တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး TL, မိုဟာမက်က F, Ely TD, ဟော့ဖ်မန်း JM, Drexler KP ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်ပတ်သက်သောအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ မော်ကွန်းတိုက်အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 58: 334-341 ။ [PubMed]
Kilts CD ကို, စုစုပေါင်း RE, Ely TD, Drexler KPG ။ ကိုကင်း-မှီခိုအမျိုးသမီး cue-သွေးဆောင်တဏှာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161: 233-241 ။ [PubMed]
နိုက် RT ကို။ လူကို prefrontal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားသည်။ Electroencephalogr ။ Clin ။ Neurophysiology ။ 1984; 59: 9-20 ။ [PubMed]
Koob gf ။ စိတ်ဖိစီးမှု, corticotropin-releasing အချက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1999; 897: 27-45 ။ [PubMed]
Koob GF, Ahmed SH, Boutrel B, Chen S, Kenny PJ, Markou A, O'Dell L, Parsons L, Sanna PP ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုသို့ကူးပြောင်းခြင်းတွင် Neurobiological ယန္တရားများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2004; 27: 739-749 ။ [PubMed]
Kouri EM, လောနိတျမွို့ SE, Mendelson JH ။ opiate နှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူ P300 အကဲဖြတ်: detoxification ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် buprenorphine ကုသမှု။ ဟားဗတ်။ 1996; 60: 617-628 ။ [PubMed]
lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိခိုက်စေရုပ်ပုံစနစ် (IAPS): ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ ratings ။ CRP, တက္ကသိုလ်ဖလော်ရီဒါ; 2001 ။ (Tech မှ။ A-5 သတင်းပို့) ။
Li CR, Sinha R. တားစီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်း: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - လှုံ့ဆော်စွဲ၌တိုကျရိုကျ - limbic ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Neuroimaging သက်သေအထောက်အထား။ Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ။ 2008; 32: 581-597 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S နဲ့, Bonson K ကို Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000; 10: 334-342 ။ [PubMed]
Lubman: D, ပီတာ, L, Mogg K ကို Bradley B, opiate မှီခိုအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုအဘို့အ Deakin ဂျေအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2000; 30: 169-175 ။ [PubMed]
အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအတွက် Lyvers အမ် "ထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးမှု": တစ် neuroscientific အနက်။ Expertimental နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology ။ 2000; 8: 225-249 ။ [PubMed]
McFarlane AC အ, Weber နဲ့ DL, Clark က CR ။ posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအပြောင်းအလဲနဲ့။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1993; 34: 311-320 ။ [PubMed]
McLellan AT, Luborsky L, Woody GE, O'Brien CP ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုလူနာများအတွက်တိုးတက်သောရောဂါရှာဖွေအကဲဖြတ်ရေးကိရိယာ - စွဲလမ်းမှုပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်း။ J ကိုအာရုံကြော Ment Dis ။ 1980; 168: 26-33 ။ [PubMed]
Metzger LJ, Orr SP, Lasko NB, Pitman RK ။ တိုက်ခိုက်ရေး-related post ကို-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက်လှုံ့ဆော်မှု Tone မှအာရုံဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997a; 42: 1006-1115 ။ [PubMed]
Metzger LJ, Orr SP, Lasko NB, McNally RJ, Pitman RK ။ PTSD အတွက်စိတ်ခံစားမှု Stroop ်ရောက်စွက်ဖက်ဆိုးကျိုးများ၏အရင်းအမြစ်ကိုရှာခွငျး: စိတ်ထိခိုက်စကား P3s ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ Integrated ဇီဝနှင့်အပြုအမူသိပ္ပံ။ 1997b; 32: 43-51 ။ [PubMed]
Michalec EM, Rohsenow DJ သမား, Monti pm တွင်, Varney သည် SM, မာတင် RA, ဒေး AN, Myers M က, Sirota အေဒီ။ တစ်ဦးကကင်းအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များစာရင်း: ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် validation ကို။ J ကိုပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု။ 1996; 8: 181-193 ။ [PubMed]
Mogg K ကို Bradley ကို BP ။ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့မှတ်ဥာဏ်-စိတ်ခွန်အားနိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသုတေသနကုထုံး။ 1998; 36: 809-848 ။ [PubMed]
Naatanen R. ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာများနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကအခြားဦးနှောက်အတိုင်းအတာအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်အာရုံသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အာရုံစိုက်မှုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဦးနှောက်သိပ္ပံပြုမူနေ။ 1990; 13: 201-287 ။
Najavits LM, Weiss RD, Shaw က SR, Muenz LR ။ "ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှာ": posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသစ်ကိုသိမြင်-အပြုအမူ psychotherapy ၏ရလဒ်။ စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဂျာနယ်။ 1998; 11: 437-456 ။ [PubMed]
Noldy NE, Carlen PL ။ ကိုကင်းရုပ်သိမ်းရေးအတွက် event-related အလားအလာအပြောင်းအလဲများကို: ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်သက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထား။ Neuropsychobilogy ။ 1997; 36: 53-56 ။ [PubMed]
O'Brien CP, Charney DS, Lewis L, Cornish JW, Post R, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်မစွမ်းမှုများခံစားနေရသောသူများ၏စောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်စေရန် ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ချက်များ - အရေးယူရန်ခေါ်ဆိုခြင်း။ ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 56: 703-713 ။ [PubMed]
Oldfield RC ။ သန်၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အ Edinburgh စာရင်း။ Neuropsychologia ။ 1971; 9: 97-113 ။ [PubMed]
Orr SP, Lasko NB, Metzger LJ, Berry ဟာ NJ, Ahern အီး, Pitman RK ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုထံမှထွက်ပေါ်လာသော PTSD နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏ Psychophysiologic အကဲဖြတ်။ ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol ။ 1998; 66: 906-913 ။ [PubMed]
Orr SP, Roth WT ။ Psychophysiological အကဲဖြတ်: PTSD များအတွက်လက်တွေ့ applications များ။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2000; 61: 225-240 ။ [PubMed]
Ouimette ကို PC, Ahrens ကို C, Moose RH အ, Finney JW ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလူနာ Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ: တစ်နှစ် posttreatment ရလဒ်များမှဆက်ဆံရေးမျိုး။ စိတ်ပညာစွဲအပြုအမူ။ 1997; 11: 34-47 ။
Ouimette ကို PC, Finney JW, posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလူနာ Moose R. နှစ်ဦးနှစ် posttreatment လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဖြေရှင်း။ စိတ်ပညာကိုစှဲအပြုအမူ။ 1999; 13: 105-114 ။
Ouimette ကို PC, Brown က PJ ။ စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု။ ယား; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2003 ။
Prins တစ်ဦးက, Kaloupek DG, ကိန်း TM အလိုအလျောက်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ arousal များအတွက် Psychophysiological သက်သေအထောက်အထားများနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေအတွက် startle ။ ခုနှစ်တွင်: Friedman MJ, Charney DS, Deutch AY, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ဖိစီးမှု၏ Neurobiological နှင့်လက်တွေ့အကျိုးဆက်များ: ပုံမှန်လိုက်လျောညီထွေ မှစ. PTSD ရန်။ ကျီးစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1995 ။ စစ။ 291-314 ။
Polich ဂျေ P300, ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် interstimulus ကြားကာလ။ Psychophysiology ။ 1990; 27: 396-403 ။ [PubMed]
Polich J ကို, Pollock, Bloom FE ့။ အရက်များအတွက်အန္တရာယ်မှာအထီးကနေ P300 ၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Psychol Bull ။ 1994; 115: 55-73 ။ [PubMed]
Polich J ကို, Herbst KL ။ ရသည့်အကြောင်းရင်း, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်: တစ်လက်တွေ့ assay အဖြစ် P300 ။ Psychophysiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2000; 38: 3-19 ။ [PubMed]
Potts gf, Patel က SH, Azzam PN ။ ယင်းအမြင်အာရုံ ERP အပေါ်ညွှန်ကြားဆက်စပ်မှု၏သက်ရောက်မှု။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ် Psychophysiology ။ 2004; 52: 197-209 ။ [PubMed]
P300 ၏ Pritchard ဒဗလျူ Psychophysiology ။ Psychol ။ နွားလား။ 1981; 89: 506-540 ။ [PubMed]
schizophrenia များ၏ Pritchard ဒဗလျူသိမှုဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ Correlate ။ Psychol Bul ။ 1986; 100: 43-66 ။ [PubMed]
Pritchard W က, Sokhadze အီး, အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာအပေါ်နီကိုတင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်၏ Houlihan အမ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ နီကိုတင်းဆေးရွက်ကြီးသုတေသန။ 2004; 6: 961-984 ။ [PubMed]
Rauch SL, ဗန် der Kolk BA, Fisler RE, Alpert မိုင်, Orr SP, et al ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် script ကိုမောင်းနှင်ပုံရိပ်သုံးပြီး posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ၏လက္ခဏာဒေါသသည်လေ့လာမှု။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1996; 53: 380-387 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ။ 1993; 18: 247-291 ။ [PubMed]
Sahar T က, Shalev AY, Porges SW ။ posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုမှတုံ့ပြန်မှု၏ Vagal မော်ဂျူ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49: 637-643 ။ [PubMed]
Saladin ME, Drobes DJ သမား, Coffey SF, Dansky BS, et al ။ အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှု၏သားကောင်များအတွက် cue-ရူးနှမ်းမူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ခန့်မှန်းအဖြစ် PTSD လက္ခဏာပြင်းထန်မှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2003; 28: 1611-1629 ။ [PubMed]
Shalev AY, Orr SP, Pitman RK ။ အစ္စရေးအရပ်သား Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါလူနာအတွက်စိတ်ထိခိုက်ပုံရိပ်၏ Psychophysiologic အကဲဖြတ်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1993; 150: 620-624 ။ [PubMed]
Shalev ဦး, Grimm JW, relapse ၏ Shaham Y. Neurobiology ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းရှာမှ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဆေးဝါးဗေဒပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2002; 54: 1-42 ။ [PubMed]
Shiperd JC, ဖြတ် J ကို, သားရေလုပ်သမား LR ။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲစစ်မှုထမ်းဟောင်းထဲမှာအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုခန့်မှန်း: PTSD ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘယျသို့အခန်းကဏ္ဍသလဲ? စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2005; 30: 595-599 ။ [PubMed]
Sinha R၊ Catapano D၊ O'Malley S. စိတ်ဖိစီးမှုများသောကိုကိုးမှီခိုနေရသည့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှု။ စိတ်ပညာ။ 1999; 142: 343-351 ။ [PubMed]
Sinha R ကို, Garcia က: P, Paliwal M က, Kreek MJ, Rounsaville BJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုကင်း relapse ရလဒ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2006; 63: 324-331 ။ [PubMed]
Sokhadze အီး, Stewart ကနေ C, Hollifield အမ် PTSD နှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ comorbid ၏ကုသမှု neurofeedback ကုထုံးနှင့်အတူသိမြင်မှုမှ neuroscience နည်းလမ်းများပေါင်းစပ်ခြင်း။ Neurothrapy ၏ဂျာနယ်။ 2007; 11 (2): 13-44 ။
စတန်းဖို့ဒ်က MS, Vasterling JJ, Mathias CW, Constans JI, ဟူစတန် RJ ။ combat- ဆက်စပ် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအတွက် P3 ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာအပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုဆက်စပ်မှု၏သက်ရောက်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန။ 2001; 102: 125-137 ။ [PubMed]
Stewart က SH, Pihl ro, Conrod PJ, စိတ်ဒဏ်ရာ, PTSD နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related မမှန်ကြားတွင် Dongier အမ် Functional အသင်းအဖွဲ့။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 1998; 23: 797-812 ။ [PubMed]
Stormark KM, Laberg JC, Nordby H, Hugdahl K. အရက်လှုံ့ဆျောမှုကိုအရက်သမားမြား၏စိတျဝငျစားသောအာရုံစူးစိုက်မှု - အလိုအလျောက်ပြုပြင်ခြင်း? အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2000; 61: 18-23 ။ [PubMed]
Vasterling JJ, Brewin CR ။ PTSD ၏ Neuropsychology ။ Guilford စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်, NY: 2005 ။
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ 2003; 111: 1444-1451 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ ဦးနှောက်ဆားကစ်နှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာ: အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ၏အလင်း၌ရှုမြင်ကြသည်။ Neuropharmacology ။ 2004; 47: 3-13 ။ [PubMed]
Weinstein AV စနစ်။ စိုးရိမျတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ခြိမ်းခြောက်၏တိုးမြှင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ Visual ERPs သက်သေအထောက်အထား။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995; 37: 847-858 ။ [PubMed]
et al Weiss က F, Ciccocioppo R ကို, Parsons LH, Katner S ကိုလျူက X, Zorrilla EP ။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse ။ Neuroadaptation, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အေးစက်အချက်များ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2001; 937: 1-26 ။ [PubMed]
Weissman MM, စိတ်ရှည် Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်လူမှုရေးညှိနှိုင်းမှု၏ Bothwell အက်စ်အကဲဖြတ်။ Arch အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1976; 33: 1111-1115 ။ [PubMed]
Wijers AA ကို, Mulder, G, Gunter TC, Smid HGOM ။ ရွေးချယ်အာရုံစိုက်မှုများ၏ဦးနှောက်အလားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ခုနှစ်တွင်: နျူမန်အို Sanders AF, အယ်ဒီတာများ။ အမြင်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်လက်စွဲစာအုပ်။ Vol 3: အာရုံစူးစိုက်မှု။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; Tullamore, အိုင်ယာလန်: 1996 ။ စစ။ 333-387 ။
မိတ်ဖက်များ၏ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုများကြောင့် ရှက်ရွံ့ပြီး အထီးကျန်ဖြစ်နေသော အမျိုးသမီးအများအပြားသည် အကူအညီရယူရန်အတွက် Reddit သို့ လှည့်လာကြသည်။A... t.co/LynLlS6RUb